Maxkamaddii dambiyada culus ee Puntland oo la tirtiray iyo garsoorayaashii oo lagu kala daray maxkamadaha Bari iyo Mudug. – Radio Daljir
Luulyo 25, 2011 12:00 b 0
Garoowe, July 25 – Digreeto ka soo baxday xafiiska M/weynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud ‘Faroole’ kuna taariikhaysnayd 24-ka bishan July, ayaa lagu baabi’iyey gabi-ahaanba maxkamadii dambiyada culus ee Puntland sida ay Radio Daljir u xaqiijiyeen qaar ka mid ah garsoorayaashii maxkamaddaasi.
Qoraalka m/weynaha ee lagu tirtiray maxkamadda dambiyada culus ee Puntland ayaa loo cuskaday dhawr arrimood oo ay ugu weynayd talo soo jeedin ka timid baarlamaanka Puntland iyo guddiga sare ee garsoorka taasoo ku saabsanayd in gabi-ahaanba meesha laga saaro maxkamaddaasi oo aan ahayn mid dastuuri ah.
Sidoo kalena qoraalka waxaa ku caddayd madaxweynuhu in uu garawsaday tirtiradda madaxkamaddaasi maadaama ay horay u ahayd mid kumeel gaar ah dastuurkuna uusan fasaxin.
Garsoorayaashii ka hawl-gali jiray maxkamaddaasi dambiyada culus ee meesha laga saaray ayaa dhammaantood lagu kala daray maxkamadaha sare ee gobollada Bari iyo Mudug kuwaasi oo goobahaasi ula wareegay galal-dacwadeedkii maxkamaddaasi lahayd.
Maxkamadda dambiyada culus ee maanta la baabi’iyey ayaa la asaasay bishii September ee sannadkii 2010-ka, taasoo ay keeneen duruufo la xiriira xagga kororka dambiyada culus ah iyo kuwa argagixiso ee gudaha Puntland.
M/weyne Faroole oo Agaasimayaal u magacaabay wasaaradaha Amniga & Warfaafinta.